कोरोनाबारे सम्पूर्ण जानकारीसहितको हातेपुस्तिका
२३ चैत, हेटौंडा । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोनाबारे सम्पूर्ण जानकारीसहितको हातेपुस्तिका सार्वजनिक गरेको छ । पुस्तिकामा कोरोनाको परिचय, सर्ने तयारी, संक्रमणबाट जोगिने उपाय, हात धुने तरिका, कोरोना संक्रमणको अहिलेको अवस्था लगायतबारे जानकारी दिईएको छ ।...
घरमै बसेर यसरी तिर्नुस् बिद्युतको महसुल
२१ चैत, हेटौंडा । लकडाउनको समयमा घरबाट बाहिर निस्कन पाईएको छैन । तर विद्युतको महसुस तिर्नुपर्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ भने अब त्यस्तो चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन । विगतको जस्तो विद्युत महसुल काउन्टरमै पुगेर पैसा बुझाउनुपर्ने बाध्यता छैन । अहिले अनलाईनबाटै विद्युत महसुल तिर्न सकिन्छ । ग्राहकले इसेवा, प्रभु बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक,...
१२ चैत, हेटौंडा । रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउन हामीमध्ये धेरैजना भिटामिन एप्लिमेन्ट सेवन गर्छौं। हामी आफ्नो वरपर नै भएका ती कुरालाई बिर्सन्छौं जसलाई नियमित प्रयोग गर्न सके शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ्छ। बदामः दैनिक ८ देखि १० वटा बदाम भिजाएर खानाले शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ्नुका साथै मस्तिष्कलाई तनावसित लड्ने क्षमता पनि प्राप्त...
आहा ! घलेगाउँ (तस्बिरहरु)
२० फागुन, हेटौंडा । लमजुङको क्व्होलासोंथर गाउँपालिका वडा नं ३ स्थित अन्नपूर्ण हिमश्रृंखलाको काखमा रहेको गाउँ हो घलेगाउँ । दक्षिण एशियाकै नमूना होमस्टेको रुपमा परिचित घलेगाउँमा पाईने आतिथ्यता र प्रकृतिको मनोरम दृष्यावलोकनका लागि पर्यटकहरुको बाक्लो उपस्थिति रहने गरेको छ । तनहुँको डुम्रेबाट उत्तरतर्फ लागेपछि लमजुङको सदरमुकाम बेसीशहर...
के हो कोरोना भाइरस र कसरी बच्न सकिन्छ ?
२२ माघ, काठमाण्डौ । चीनको हुबेइ प्रान्तबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा समेत भेटिएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालसहित चीनका साथै अमेरिका, हङकङ, मकाउ, ताइवान, फ्रान्स लगायत १२ देशमा भेटिएको छ । के हो त कोरोना भाइरस ? कोरोना भाइसरको वास्तविका नाम नोबेल कोरोना भाइरस हो । कोरोना भाइरस रुघाखोकीदेखि मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी...
कोठा तताउन हिटर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ ? सावधान ! ज्यान जान सक्छ
७ माघ, हेटौँडा । कोठा तताउन हिटर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने सावधानी अपनाउनु जरुरी रहेको छ । मकवानपुरको दामनस्थित एभरेष्ट पानोरमा रिर्सोटमा कोठा तताउन प्रयोग गरिएको हिटरका कारण अचेत भई ८ जनाको ज्यान गएसंगै यस्तो सावधानी अपनाउनु जरुरी देखिएको हो । जाडोयाममा हिटर प्रयोग गरी कोटा तताउने क्रम बढ्ने गरेको छ । हिटर प्रयोग नगर्दा बर्षेनी...
ग्याँस गिजरमा नुहाउँदा मृत्युको मुखमा पुगेका विडारीको अनुभव
२ माघ । कुरा पुस २७ गतेको हो । विहान ९ बजेतिर खाना खाने बेला थियो । खाना खानु अघि नुहानु पर्यो भनेर म बाथरुममा पसें । बाथरुममा पसेर ढोका बन्द गरें, सानो भन्टिलेशन भने खुल्ला थियो । म गिजरबाट धेरै तातो पानी आउने भएकाले तातो पानीमा केही चिसो पानी मिसाएर नुहाउन थालें । बाथरुम एकछिनमा बाफले भरियो । नुहाउने क्रममा एक पटक साबुन लगाएर पखालेकोसम्म...
बिहीबार बिहान खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने
७ पुस, काठमाडौँ । पुस १० गते बिहीबार पौष कृष्ण औँसीका दिन बिहान खण्डग्रास (आधा ढाक्ने) सूर्यग्रहण लाग्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ । ग्रहणले बिहान ८ः४२ मा स्पर्श गर्ने र बिहान ११ः३१ बजे समाप्त हुने समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए । ग्रहण लाग्नुभन्दा १२ घण्टा अघि बालक, वृद्ध र रोगीबाहेकलाई...
झाडापखाला, टाइफाइड, छालाका संक्रमण आदि) देखा पर्छन् । यहाँ भने जाडो मौसममा हाम्रो शरीरमा देखिने समस्या र बिरामीले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछौं। १. चिसोबाट हुने छातीको संक्रमण चिसो मौसममा हुने सामान्य रुघाखोकीदेखि छातीमा देखिने गम्भीर किसिमको संक्रमणबारे समयमै ध्यान दिन सकेमा यसले गर्ने असरहरु कम गर्न सकिन्छ।...
१० कार्तिक, हेटौंडा । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं मकवानपुर सभापति शान्ति प्रवर्द्धनका...